Incwadana yeendaba No. 9 Nge-2020 yonyaka-uMvuzo weSiseko
Ikhaya Incwadana yeendaba uNombolo 9 nge-2020
Incwadana yeendaba uNombolo 9 nge-2020
Wamkelekile kwiNtwasahlobo! Siyathemba ukuba uyayonwabela imozulu entle kwaye ujongana kakuhle nemeko engaqhelekanga sonke esizifumana sikuyo ngeNtlakohlaza. Hlala ukhuselekile.
Kwi-Reward Foundation sithathe ithuba lezikhewu kwidayari yethu ukufumana uluhlu lwemisebenzi kubandakanya lencwadana incwadana. Ahem! Nazi izinto ezimbalwa eziye zasigcina sixakekile kwezi nyanga zimbalwa zidlulileyo: ukwenza iindibano zocweyo kunye neentetho kwiindawo ezahlukeneyo; ukufunda uphando olutsha; ukuvelisa amaphepha ophando ngokwethu; ndithetha ezikolweni nakwiintatheli kwaye sicwangcisa iqhinga lethu lonyaka ozayo. Kumnandi, kumnandi kwaye kumnandi ngakumbi.
Ukongeza kwizinto ezigqwesileyo zeendaba, sikhethe iiblogi ezimbalwa kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo ukuba ubaphosile kwiwebhusayithi. Nalu ikhonkco kuluhlu oluphambili lwe blogs.
Kulula kakhulu ukuchitha ixesha lasimahla ukukhathazeka kunye nokukhanya malunga necala elibi leli xesha. Ukulungisa ibhalansi kancinci nazi ii-aphorisms ezimbalwa ukubeka iingcinga zethu kokulungileyo:
"Ndiyakuthanda ngomoya, ukumomotheka, iinyembezi zobomi bam bonke!" ngu-Elizabeth Browning
"Uthando kuko konke esinako, ekuphela kwendlela esinokuncedana ngayo." yi-Euripides
Uthando olungakhawuleziyo luthi: 'Ndiyakuthanda kuba ndiyakudinga.' Uthando oluvuthiweyo luthi: 'Ndiyakudinga kuba ndiyakuthanda.' " NguE. Fromm
breIindaba ze-aking zeNtwasahlobo 2020
Idokhumenti eNtsha yaBafundi yaBazali malunga neZiphumo ze-Porn kuBantwana
Nceda ubhalisele iVimeo ukuze jonga i-trailer kule documentary intsha yenziwe ngabazali eNew Zealand. Umama nguScotland.
Itreyila simahla, kodwa ukubukela ividiyo esisiseko kubiza iidola ezimbalwa. URob noZareen bakwenzile oku kuhlahlo-lwabiwo mali olunqabileyo besebenzisa izakhono zabo kunye nokuzimisela okukhulu, ke nceda uthenge ukuba unako. Enkosi.
I-BBC yaseScotland: IsiThoba-sokuQhawulwa ngokwesondo
NgoDisemba wonyaka ophelileyo, iBritish Scotland i-Nine yaxoxa noMary Sharpe we-TRF malunga nokunyuka okuothusayo kwamatyala okutshatiswa ngokwesondo emva kokubulawa kukaGrace Millane eNew Zealand. Jonga udliwanondlebe Apha.
UMary Sharpe, uSihlalo weThe Reward Foundation kunye nentatheli uJenny Constable, kunye nabaphathi be studio abasithoba UMartin Geissler kwaye URebecca Curran
Le meko ilusizi ayisiyonto iqhelekileyo kwaye intsonkothile kunokuba ibonakala kuqala. Ngokutsho kovavanyo lwango-2019 olwenziwe yi-Sunday Times kabini abantu ababhinqileyo abancinci abangaphantsi kweminyaka engama-22 ubudala (iGeneration Z) bakhetha isini esirhabaxa kunye ne-BDSM (ubukhoboka, ukubusa, ukurhawuzelela kunye ne-masochism) njengeendlela zabo abazithandayo ze-porn xa kuthelekiswa nabafana abancinci. Oku kubangela iingxaki ezinkulu kwiinkundla zamatyala okuhlaselwa ngokwesondo xa kuthathwa ukuba kukho imvume yokwenyani yezesondo, uhlobo lwe-BDSM.
Usuku lukaValentine eBelfast
Besonwabile sisamkelwa ngokufudumeleyo esakusifumana ngoSuku lweValentine eLisburn, kufutshane neBelfast. Siza kuthatha inxaxheba kwiVeki yezeMpilo yezeSondo yaseMantla. Kubekho ukuvela okumangalisayo kweengcali kulo lonke icandelo lezempilo kunye nelezomsebenzi wentlalo. Sibonise ngesihloko esithi "I-Intanethi. Kwakhona, asizange simangaliswe kukufumanisa ukuba uninzi lwee-GP, eyindoda kunye nabasetyhini, babengazi unxibelelwano oluphakathi kwamanqanaba aphezulu okusetyenziswa kwe-Intanethi iphonografi kunye nokungasebenzi ngokwesondo kwabafana abancinci. Bangathanda ukusimema ukuba sibuyele ngaphezulu.
I-TRF kwiziko laseLagan Valley Civic Centre, eLisburn eMantla eIreland.
Mamela kwiingcali zeziyobisi
Iya kuba yinto efanelekileyo ngexesha lakho ukuba uchithe ixesha mamela uze ufunde Ukusuka kwaba baprofesa babini bengqondo. UKent Berridge osuka kwiDyunivesithi yaseMichigan, e-USA kunye noFrederick Toates weYunivesithi evulekileyo e-UK bakhokela iingcali ngeziyobisi. Yintoni eqhuba inkuthazo, ulonwabo kunye nentlungu? Kubaluleke kakhulu ukuqonda ukuba abantwana bethu kunye nabantu abancinci baba ngamakhoboka oonografi, ukugembula, ukungcakaza njalonjalo inyathelo lokuqala ukuze sibancede baphile ubomi obunempilo kwikamva.
Oonjingalwazi uKent Berridge kunye noFrederick Toates
Sibe nethamsanqa lokulawula indibano enye yosuku lokugqibela elipheleleyo nge-17th Nge-Matshi e-Kilmarnock ngaphambi kokuba i-lockdown ibambe. Umxholo yayingu- "Iphonografi kwi-Intanethi kunye noBundlobongela oBunikezelwe".
Into enomdla eye yavela kwiworkshop yangaphambili kunye neBhunga kukuba aboni bezesondo kunye nababekwa ityala lobundlobongela basekhaya baphathwa ngendlela eyahlukileyo ngabasemthethweni. Umzekelo, kukho izixhobo ezahlukeneyo zokuhlola umngcipheko kudidi ngalunye kwaye kwimeko nganye akukho ngxaki yokujonga iphonografi. Ngokwenza ikhonkco kwindlela yokunyanzelwa kokusetyenziswa kwe-intanethi iphonografi kungakhokelela ekuthathweni kwezigqibo ngendlela engeyiyo, ubundlongondlongo kunye nokuxhonywa kwabanye abasebenzisi, abasebenzi bezolwaphulo-mthetho kwezolwaphulo-mthetho banokufumana ungenelelo olungcono ukunceda ukunciphisa imeko yobundlobongela basekhaya iya phambili. Ukusetyenziswa okungcolileyo kwe-porn kunokukhokelela kubundlobongela basekhaya kunye nokona ngokwesondo. Sinethemba lokusebenzisana neli Bhunga kwakhona kulo nyaka.
Uyolo, ividiyo emfutshane yabantwana bayo yonke iminyaka!
Isiseko soMvuzo siyinxalenye yomanyano lwemibutho. Sikhankasela urhulumente wase-UK ukuba aphumeze umthetho wokuNgqinisisa i-Age yokufumana iisayithi ezingamanyala. Nceda uthumele le vidiyo kubantwana abaninzi, abazali, imibutho yolutsha, MP, abaphembelela kwimithombo yeendaba kuluntu njengoko unokuxhasa umyalezo. Yifumane apha: https://ageverification.org.uk/
"Ukutshatisa" imalunga nokukhohlisa abantwana ukuba benze into engalunganga, umzekelo, ngelixa behleliwe. Ke ngaphandle kolwazi lomntwana, imifanekiso okanye urekhodo lwehambo engafanelekanga "ibanjiwe". Zisetyenziswa emva koko ukugxotha okanye ukuthulula ixhoba kwixhoba. Iipidophiles kunye nezinye izinto ezixhaphaza abanye ngokwesini zingabenzi bobubi kodwa kunjalo ngabantu abangenamdla kwaphela kwezesondo ebantwaneni. Bajonge iindlela ezilula zokufumana imali okanye iimpahla. Oku kunokubakhathaza kakhulu abantwana abangenalo nofifi lokujongana nezoyikiso.
I-Big Porn ifuna ukuKhulisa kwiNtsholongwane
Ngexesha lentlekele, icandelo lezobisi yongeza ububi obungakumbi babantu. I-Pornhub yenze umxholo weprimiyas wasimahla kulo lonke ilizwe. " Ukujonga kunye nokuthengisa kuthungelane njengesiphumo…
“Kwimuvi yowe-1980 -Moya!, umlawuli we-air-traffic Steve, uSteve McCroskey, usokola ukukhokela inqwelomoya inqwelomoya bonke abangabasebenzi betyisiwe kukutya. "Kubonakala ngathi ndikhethe iveki engalunganga yokuyeka ukutshaya," utshilo, ethuka kakhulu. Emva kwexesha, wongeza ukuba kwakuyiveki engalunganga yokuyeka i-amphetamines kwaye iphinde ibe "yiveki ephosakeleyo yokuyeka ukukhupha i-glue."
Bazali bahlala besibuza ukuba yintoni oorhulumente ekufuneka beyenzile ukunciphisa umngcipheko wokwenzakala kwi-Intanethi kubantwana babo. Le bhlog yazisa abanye babadlali ababaluleke kakhulu, kubandakanya umanyano we-WEPROTECT wehlabathi.
nqakraza Apha ukufunda okungakumbi malunga ne-Global Alliance kunye neqela "elinamehlo amahlanu".
Abazali banokothuka xa besazi ukuba ngelixa ukuthumelelana iifoto zontlalontle kuxhaphake kakhulu, ukuthumelelana imiyalezo nemiyalezo ethunyelwa ngasese kuxhaphakile. Uphando lubonisa ukuba luphenjelelwa kukubukela iphonografi njengoko lukhuthaza ukuxhaphaza, ukukhohlisa kunye nenkohliso. Le bhlog ibandakanya amaphepha ethu malunga nokuthumelelana imiyalezo ngemiyalezo ethunyelweyo kunye nemfanelo esemthethweni. Inenqaku elinomdla eliphuma kwiphephandaba iThe Guardian.
Isikhokelo saSimahla sabazali kwi-Intanethi ye-Intanethi
Ukuvalelwa emakhaya ngexesha lendyikityha yokufa, abantwana abaninzi abanokufikelela ngokulula kwi-intanethi baya kuba nokufikelela kwizinto zabantu abadala. Oku kunokujongeka njengokuzonwabisa okungenabungozi, kodwa iziphumo ziya kubonakala ngexesha elifanelekileyo. Ukuba ungumzali funda kangangoko malunga nendlela onokuthetha ngayo nabantwana bakho malunga namanyala. Ayifani ne-porn eyadlulayo. Bona eyethu Isikhokelo sabazali samahhala kwi-intanethi ye-Intanethi Iividiyo ezahlukeneyo, amanqaku, iincwadi kunye nezinye izibonelelo. Inokukunceda ube nezo ngxoxo zinzima.
Isiseko somvuzo kwi-Twitter
Nceda ulandele i-Reward Foundation kwi-Twitter @brain_love_sex. Apho uyakufumana uhlaziyo rhoqo malunga nophando olutsha kunye nophuhliso kule ntsimi njengoko zibonakala.